Banyere Anyị - Hebei Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd.
Hebei Textiles ike na 1974, emi odude ke Shijiazhuang City, Hebei Province.
"Ịdị n'otu, ịdị uchu, irè na nraranye" ka mgbe niile anyị enterprise spirit ebe ya oruru. Anyị na-egosipụta ọnụ ọgụgụ na ngwa mmepe site ọrụ ike na-asụ ụzọ mgbalị. Anyị ụlọ ọrụ emewo wee aha ọma n'ụlọ na mba ọzọ. anyị bụ ndị gbaara enterprise nke ISO 9001, omenala AEO Senior certificated enterprise. E wezụga, anyị bụkwa AA Ahịa nke Sinosure na mbupụ tax mmelataego A ọkwa ụlọ ọrụ.
Anyị ụlọ ọrụ na-agba mbọ iji na-enye a na nso nke elu àgwà oru oma ọrụ na elu àgwà na ngwaahịa, na-eje ozi na-azụ ahịa na-ere ákwà na gburugburu ụwa. Mgbe afọ 40 nke na-aga n'ihu mmepe, nke nta nke nta kpụrụ a n'elu-ala mbupụ otu na ọgaranya sales ahụmahụ na arụmọrụ ike, na ngwaahịa aka n'ọtụtụ mba na mpaghara dị ka Europe, America, Asia, Africa na Australia. The ụlọ ọrụ kwa afọ mbubata na mbupụ olu kwubara na n'elu 30 na Hebei Province. Anyị ụlọ ọrụ kwa afọ mbubata na mbupụ olu na 2017 karịa 100 nde US dollar.
The usoro nke glycine ngwaahịa ejikwara site anyị ụlọ ọrụ, ịdabere na ndị kasị ibu n'ụwa glycine mmepụta isi - Hebei Province, China ebe anyị wuru a ukwuu usoro mmekorita ya na ya nnukwu-ọnụ ọgụgụ mmepụta ihe. Na na ndabere nke na-arụkọ uru, anyị na-enye zuru play anyị nwoke uru. The isi ngwaahịa bụ Glycine, Glycine chelate, Pharmaceutical intermediates na ndị ọzọ na amino asịd. Anyị ifịk ifịk inyocha mba ahịa na-eje ozi zuru ụwa ọnụ na ọrụ na elu àgwà, anụ ngwaahịa na asọmpi ahịa.
The ahịa si mkpa bụ ọrụ anyị ụkpụrụ, na ahịa afọ ojuju bụ ọrụ anyị lekwasịrị anya. Anyị dị njikere igosi ibe ntụkwasị obi na-erite uru ekwenye mmekọrịta gị na a ogologo oge na connive a development omume ọnụ.
Mgbe ị na-ekpebi
Okwu: No.42 Xisanzhuang n'okporo ámá, Shijiazhuang, Hebei, China
Gịnị mere ndị mmadụ iri glycine?